Tababaro millatari oo iska soo horjeeda iyo qatar shil oo laga digayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciidamo tabobar ku jira. sawir: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Tababaro millatari oo iska soo horjeeda iyo qatar shil oo laga digayo
"Qatar shil mar kasta wey jirtaa"
La daabacay måndag 11 september 2017 kl 10.21
Maanta oo isniin ah ayuu Sweden ka bilowday tabobar weyn oo ah dhanka difaaca oo loogu magac daray Aurora 17.
Maalinta khamiista ah ayaa asna Ruushka dhankiisa bilaabi doonaan tabobar difaac oo loo baxiyey Zapad. Labadan tabobar ayaa wado-jir uga socon doonaa biyaha Östersjön/Baltic Sea, iyadoo xeer-dheerayaasha ka digayaan in ay kordhi karto qataraha shil ee ka dhex dhaci kara diyaarahada iyo maraabkiita dagaalka ee tabobarada uga qayb qaadanya labada dhinac.
– Maadaama labo tabarbar oo weyn ay isku mar dhacayaan, ayey mar kasta jiri kartaa qatar shil. Biyaha östersjön/Baltic sea ayey ka socon doonaan howlo ciidan kuwii ugu badnaa muddo dheer, ayuu yeri Jörgen Elfving oo ah korneel horey uga tirsanaan jiray ciidaamada xooga Sweden.
Sannadyadii ugu dembeyey ayey dhacday in diyaarado iyo maraakiib dagaal oo laga leeyahay Ruushka ay si aad qatar u leh ugu soo dhawaadeen diyaarado iyo maraakiib ka socday Sweden iyo Nato. Inta uu socdo tabobarka weyn Aurora ayey unugyo ciidan oo ka socdo Sweden, Finland iyo Mareykanka mari doonaan agagaarka halka ay ku sugan yahiin ciidamada badda iyo diyaarahadaha dagaalka ee Rushka.
Sidaas daraadeed ayey Xeel-dheerayaasha dhanka milatariga ka digayaan kordhitaanka qatarta shil ee ka dhex dhaci kara dhinacyada ciidaan ee iska soo horjeeda. Gaar ahaan diyaaradaha wax basaasa ee laga leeyahay Nato oo ku dul heehaabi doona ciidamada tabobarka ku jira ee Rushka.
–Qatarta ugu weyn ee shil waxa ay ka jirtaa dhanka hawada madaama ay doonayaan ciidamada reer galbeedku in ay wax ka ogaadaan tobobarka Ruushka, halka asna Ruushka dhankiisa doonayo in uu helo xogta tobbarka Sweden ee Aurora, ayuu yeri Jörgen Elfving.
Laakiin gaashaanle sare Bengt Andersson oo hoggaaminaya tobobarka Aurora ee Sweden ayaa qatarta shil keeni karta hoos u dhigay, madaama labada ciidan ee tabobaranaya ay ku kala sugan yahiin dacalada biyaha Östersjön.
– Haa, qiimeeynteyda waxa ay tahay haddii aan la dooneynin shir in uu shil dhaco in uusan dhaci doonin, ayuu yeri Bengt Andersson.